Igbe Drawer, Akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Igbe mbadamba akwụkwọ eserese China na-eduga onye na-eweta ngwaahịa
Nkọwa:Igbe Igbe,Akwukwo Akwụkwọ,Edere Igbe,Igbe Na-adọka Akwụkwọ,,
 HomeNgwaahịaIgbe OnyinyeIgbe Igbe
Igbe Igbe (Total 35 Products)
Ngwaahịa nke Igbe Igbe , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Igbe Igbe , Akwukwo Akwụkwọ suppliers / factory, wholesale high-quality products of Edere Igbe R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Omenala edeputara uzo abuo nke agba abuo
Igbe ahịa Ewu Edere Ederese Mee nke ọla
Igbe agba aja aja kraft maka igbe nkwachi belte
Igbe mpempe akwụkwọ eji achọ ihe eji achọ mma
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ eserese igbe mpempe akwụkwọ
Uhie abụọ nke igbe kaadi na-adọta igbe
Igbe agba agba agba igbe igbe
Igbe mara mma drawer ọla mara mma na akara ngosi omenala
Igbe ozu ahia omenala maka igbe drọ ọkpọ
Igbe klaasị Brown Kraft kaadi na-adọta igbe na rịbọn
Akwukwo draịv akwụkwọ na-acha ọcha na-acha ọcha
E biri ebi okomoko nke igbe drọ ojii na ụfụfụ
Nkwakọ ngwaahịa obere akpa eji adọta akpa igbe igbe
Igbe onyinye dị ụtọ nke Matrịsị Black Akwụkwọ
Igbe mpempe akwụkwọ eji eme mkpọtụ na akpa akwụkwọ
Igbe eserese na-efe efe maka ngwugwu nwere akpa akwụkwọ
Akwukwo Drawer Box mpempe akwụkwọ dị elu
Onyinye kaadiboodu eji ebu ihe ohuru
Igbe mpempe akwụkwọ ojii na-eji PU onye na-adọta ya
Akwukwo draịva brown kraft na mbipụta
Omenala edeputara uzo abuo nke agba abuo Igbe ozu na-adọta igbe , igbe mpempe akwụkwọ mpịakọta abụọ, ụdị igbe igbe siri ike Igbe ozu draịva omenala, igbe igbe na mbipụta omenala emere Igbe mpempe akwụkwọ eserese na-ebipụta akwụkwọ, akwa na-ebipụta...
Igbe ahịa Ewu Edere Ederese Mee nke ọla igbe igbe bụ kaadị ojii nwere akara foil edo, akwụkwọ mmado 2mm, ụfụ ojii iji jide ọla dị ka ntinye. mgbe ị mepee Igbe ahụ, ị ​​ga-ahụ ọmarịcha ọla, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye igbe ọla okomoko dị oke ọnụ maka...
Igbe agba aja aja kraft maka igbe nkwachi belte A na- eji igbe mpempe akwụkwọ pbrown kraft na kraft mpempe akwụkwọ na kaadiboodu akwụkwọ na njikwa ndị ahịa. K raft paper drawer igbe nwere ike ịbụ akara omenala, agba na nha. Browndị agba aja aja dị...
Igbe mpempe akwụkwọ eji achọ ihe eji achọ mma The ọla nkwakọ igbe ejiri akwukwo na akwukwo ihe eji eme ya. A na- eji igbe a na- adọta igbe maka ọla, akwa nhicha, sock, elekere, ect. Ọ dị m mfe iwepụ. Igbe ya na ijiji eme ihe dabara adaba na ngwaahịa...
Igbe eserese pink na eriri aka A na- eji nkwakọ ngwaahịa igbe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nka / mpempe akwụkwọ kraft / mpempe akwụkwọ na njikwa ndị ahịa. P aper eji drawer igbe nwere ike ịbụ akara omenala, agba na nha. Igbe mpịachi a enwere ike...
Igbe eserese pink na eriri aka A na- eji igbe eserese pink na mpempe akwụkwọ art na kaadiboodu akwụkwọ nwere atụmatụ ndị ahịa. P ink drawer igbe na handle nwere ike ịbụ akara omenala, agba na nha. Aka ga-eji rịbọn pink na ịchọ mma na obere pink...
Uhie abụọ nke igbe kaadi na-adọta igbe Red abụọ n'ígwé igbe drawer igbe bụ red ndabere agba nka akwụkwọ, Ọ mere 1.5mm kaadiboodu rụpụtara, acha ọbara ọbara agba biri ebi egwuregwu egwuregwu UV logo, Ihe niile anya zuru okè! A haziri ihe niile ma...
Igbe akwa agba agba igbe igbe na ntinye A na- eji igbe eserese na- acha ọcha na mpempe akwụkwọ na kaadiboodu. Igbe Dawer nwere ntinye ụfụfụ nwere ike ịbụ akara omenala, agba na nha. Ọ nwere ike na-ebi akwụkwọ na n'ime. Igbe ozu ozu ahia nke...
Igbe mara mma drawer ọla mara mma na akara ngosi omenala A na -eji mpempe akwụkwọ igodo igbe igbe igbe . Igbe D ịchọ mma ọla kọfị nwere ike ịbụ akara ngosi, agba na nha. Ọ nwere ike na-ebi akwụkwọ na n'ime. Igbe ọmarịcha drawer igbe...
Igbe ozu ahia omenala maka igbe drọ ọkpọ A na -eji igbe esere ntị a na-eme ihe. D rawer igbe maka ọla ntị nwere ike ịbụ akara omenala, agba na nha. Ọ nwere ike na-ebi akwụkwọ na n'ime. Igbe draịva omenala nwere agba dị iche iche ga-anabatakarị...
Igbe onyinye igbe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke agba agba aja aja na agba agba aja aja Igbe onyinye agbapụta agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba gburugburu, ị nwere ike itinye obere onyinye, kaadị...
Akwukwo draịv akwụkwọ na-acha ọcha na-acha ọcha Igbe eserese na-adọkpụpụta bụ igbe igbe ọ na-adọkpụpụta, ị nwere ike itinye onyinye pere mpe, kaadị azụmaahịa, ngwa ndị eji achọ mma, ezigbo mma iji jide ngwaahịa dị iche iche, ọ bụrụ na ị nwere mmasị...
Egosiputa okomoko nke puru iche nke igbe eji etinye oji na foam Igbe igbe oji dị iche na igbe drawer ndị ọzọ a na-ahụkarị, igbe igbe ya pụrụ iche dị ka igbe sịga, ọ dị mma maka ụlọ ahịa ọla na ịzụ ahịa, ma ọ bụrụ na ị chọrọ akwa mma pụrụ iche igbe...
Inye Ike: 1000000pcs/month
Nkwakọ ngwaahịa obere akpa eji adọta akpa igbe igbe Igbe onyinye eji achọ mma nke eji akwụkwọ ọcha mee nke mpempe akwụkwọ akwụkwọ ọkpụrụkpụ 1.5-2.5mm dịka nha igbe drawer na nke kachasị gị mma; Igbe onyinye pere aka na nha 9x9x3cm maka nkwakọ ọla...
Inye Ike: 500000 per month
Igbe onyinye dị ụtọ nke Matrịsị Black Akwụkwọ Matte Black Paper Drawer Onyinye Onyinye onyinye na eji eserese drọd; Igbe Akwukwo Nke a na-eji matte black kaadi mpempe akwụkwọ n’elu 2mm isi akwụkwọ, kpuchie ya na foil stamping omenala; Igbe nzuzu...
Igbe mpempe akwụkwọ eji eme mkpọtụ na akpa akwụkwọ Igbe eji etinye ihe eji etinye ihe, igbe eserese pink na tebụl matte, okomoko na ejiji . Igbe eji adọkpụ , igbe eji achọ mma, tinye ya, nwere ike igosi ngwaahịa gị nke ọma. Igbe nkwakọ ngwaahịa ,...
Igbe eserese na-efe efe maka ngwugwu nwere akpa akwụkwọ Igbe eserese na-efe efe maka ngwugwu, igbe igbe pink na-eji akwa larịị, okomoko na ejiji . Igbe eji adia, igbe eji achọ mma, tinye ya, nwere ike igosi ngwaahịa gị nke ọma. Igbe Drawer maka...
Akwukwo Drawer Box mpempe akwụkwọ dị elu Igbe mpempe akwụkwọ ojii na-eji oji, igbe eserese pink na teepu matte, okomoko na ejiji . Mpempe akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ , igbe nkwakọ ngwaahịa ọla na ntinye, nwere ike igosi ngwaahịa gị nke...
Onyinye kaadiboodu eji ebu ihe ohuru Onyinye kaadiboodu onyinye igbe igbe, igbe agba odo pink igbe tinyere akwa, ihe okomoko na ejiji . Igbe onyinye igbe mpempe akwụkwọ onyinye, igbe ngwungwu ọla na ntinye, nwere ike igosi ngwaahịa gị nke ọma. Igbe...
Igbe mpempe akwụkwọ ojii na-eji PU onye na-adọta ya Igbe ozu na-akụ igbe, igbe draịva kpochapụwo na mbipụta akara omenala Anyi nwere ndi okacha amara nke ihe mmeputa na ihe eji emeputa ihe ndi di elu, ya bu na onu ahia anyi n’iru ike. Black drawer...
Akwukwo draịva brown kraft na mbipụta Igbe Kraft mpempe drawer igbe , igbe draịva kpochapụwo na mbipụta akara omenala Igbe agba aja aja, nke akwụkwọ kraft na-acha aja aja kpuchie, akwụkwọ mkpuchi ahụ bụ dịka ihe gị chọrọ Igbe dị mma nke ebipụtara na...
China Igbe Igbe Ngwa
E guzobere Liyang Paper Products Co., Ltd. na 1999, ụlọ ọrụ ọkachamara agbakwunyere na R&D, andzụ ahịa na Nrụpụta.Liyang Printing na-enye usoro kachasị mma na ọrụ dị iche iche n'ọtụtụ ụlọ ọrụ.Ima atụ, anyị nwere ike ịme igbe igbe ọmarịcha mma na okomoko nke ngwaahịa. igbe dị ka igbe ọchọ mma, igbe drawer igbe, igbe drawer, wdg. igbe igbe ọyị nke nwere nnukwu mma na-adọrọ mmasị nchịkọta maka ngwaahịa gị.
Ajụjụ ọ bụla na igbe drawer anyị, ịnabata ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla.
AsambodoỤlọ ọrụ GosiVideo
Igbe Igbe Akwukwo Akwụkwọ Edere Igbe Igbe Na-adọka Akwụkwọ Igbe igbe
Copyright © 2019 Liyang Paper Products Co., Ltd. Ikike niile echekwala. Kwadoro site na